China mpanamboatra alim-bary vita amin'ny kitapom-bary vita amin'ny hazo | Chenyu
Ny lokon'ny voan-kazo dia manasongadina ny fiheverana ny fiainana maitso sy sariaka amin'ny tontolo iainana, ary taratry ny endrika maritrano ambony sy mirehitra, izay manamaivana ny fihenjanan'ireo mponina an-tanàn-dehibe aorian'ny asa. Toerana maro toy ny kafe, klioban'ny fialamboly ary toerana hafa no mampiasa hazo fisaka hazo. Ny takelaka vita amin'ny voan-kazo dia misy vidiny antonony, maharitra, matevina ary tsy matevina ary misy plastika avo lenta. Ankehitriny dia lasa malalan'ny mpamorona maro izy ireo.
2. Amin'ny fampiasana loko fluorocarbon PVDF dia azo ampiasaina mandritra ny 25 taona tsy mihena.
5. Ny tsy fametahana ny sarimihetsika manarona fluor dia manasarotra ny fanarahan'ny loto ny etona ary misy fahadiovana tsara.
6. Ny takelaka aluminium dia niforona tao amin'ny ozinina, ary ny toeram-pananganana dia tsy mila hokapaina, ary azo amboarina amin'ny rindrina.
7. Ny takelaka aluminium dia azo averina 100%, izay tsy mitovy amin'ny fitaovana haingon-trano toy ny fitaratra, vato, seramika ary takelaka plastika vita amin'ny aluminium, ary manana sanda ambony be.
Teo aloha: Vato vita amin'ny alimina tsy misy plastika
Manaraka: Vato vita amin'ny alimina vita amin'ny vato